allsanaag.com - Qaswadihii Puntland oo digniin loo diray
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3210	Days	21	Hours	32	Minutes	35	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Qaswadihii Puntland oo digniin loo diray
Written by khalid	Gudiga Nabadgelyada Gobolka Bari ayaa Maanta Digniin Udirey C/laahi Siciid Samantar oo loo arko in uu wado Falal ka dhan ah Amniga Guud ee Puntland.
Dawladda Puntland ee Soomaaliya.
Gudiga Nabadgelyada Gobolka Bari.
Ku: Taliyaha Qeynta Booliiska Gobolka Bari Bosaaso.
Ku:Cabdullaahi Saciid Samantar -Bosaaso.
Og:Taliyaha Ciidanka Booliiska Puntland Bosaaso.
Og:Wasaarada Amniga & DDR Bosaaso.
Ujeedo: Adkaynta Nabadgelyada Guud ee Gobolka.
Si Loo Adkeeyo Nidaamka iyo Kala Dammbaynta Guud ,Waxa Gudiga Nabadgelyada Gobolku Go’aamiyey in la hirgeliyo Fulinta Qodobada soo Socda:
1-Inaan Wax hub ah oo Gaadiid Saaran Ama ku xiran (Tikniko) aan lagu dhex wadan Karin Magaalada Bosaaso iyo Guud ahaan Gobolka Bari.
2-Inaan Hoteelada iyo Meelaha kale ee la isugu Yimaado aan lagu qaban karin Wax shir ah oo iyadoo aan ogolaansho laga haysan Gudiga Nabad Gelyada ee Gobolka Bari.
3-G.C/laahi Siciid Samantar Waxaa loo ogolyahay in uu wato Ilaalo Kooban oo aan wadan Tikniko iyo Hub Culculus Midna.
Saxiixayaasha Gudiga Nabadgelyada ee Gobolka Bari.
1-C/samad Maxamed Galan -Gudoomiyaha Gobolka Bari.
2-Yuusuf Muumin Bidde-Gu.Xigeenka Gobolka Bari.
3-Khadar Ismaaciil Cabdalle-Ku X.2-aad ee Gobolka Bari.
4-G/lle Sare Cusmaan Xassan Cali -Taliyaha qeybta G.Bari.
5-Xassan Cabdalle Xassan -Duqa Degmada Bosaaso.